Lynda ANDRIATSITONTA KOFITAM 143B	0 Commentaire juin 2, 2018
Eo amin’ny fiangonana Anglikana Ambavahaditokana ny toby fiantsonana ho an’ny zotra KOFITAM 143B. Ho fanamaivanana ny resaka fitateram-bahoaka no antony nanangana ity zotra vaovao mampitohy ny kaominina Ambavahaditokana sy i Mahamasina ity. Nanomboka ny sabotsy 26 Mey 2018 teo no efa niasa ireo fiara fitateram-bahoaka manaraka ny bokin’andraikitra mifehy ny zotra KOFITAM 143B.
Mitombo hatrany ny zotra mampitohy an’i Itaosy an’Antananarivo- Renivohitra. Noho ny fitohanan’ny fiara lavareny izay saika isan’andro manomboka eo Andranonahoatra ka hatreo amin’ny tetezan’Ampasika, misy amin’ireo fiara fitateram-bahoaka no tsy manaja intsony ny voasoratra ao anatin’ny bokin’andraikitra. Tsy tonga any amin’ny toby fiantsonana farany intsony izy ireo. Eo amin’ny Fiaro dia efa mitodi-doha miverina. Hany ka voatery mandeha fiara in-droa raha ho any Analakely. Ho an’ireo mpiasa, mpianatra…efa voafetra ny teti-bola natokana ho an’ny saran-dalana ka tsy maintsy miandry ny fiara mankany Analakely na tiana na tsy tiana. Na mandeha tongotra rehefa tsy mahandry satria sao dia tara. Zary lasa andavanan-androm-piainan’ny mponina mipetraka eny Itaosy ny fitohanana fiara-kodia lavareny, ny fandehanan-tongotra. Hatramin’izao, mbola tsy nahitam-bahaolana ity fitohanana ity.
‹ FAMPANAJÀNA NY ZON’OLOMBELONA: Notolorana boky kely ny polisim-pirenena	› CNaPS : Un régime pour la retraite des paysans